ईपीएलको उपाधिका लागि पोखरा र चितवन भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? – ramechhapkhabar.com
ईपीएलको उपाधिका लागि पोखरा र चितवन भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाण्डाै – एभरेष्ट प्रिमियर लिग ईपीएल क्रिकेटको उपाधिका लागि आज चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोज खेल्दैछन् । खेल दिउँसो सवा १२ बजे त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा सुरु हुनेछ ।
चितवनले पहिलो क्वालिफायरमा पोखरालाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो । पोखराले भने दोस्रो क्वालिफायरमा भैरहवालाई हराउँदै चितवनसँगको भेट पक्का गरेको हो ।
पोखरा विनोद भण्डारीको कप्तानीमा र चितवन, सोमपाल कामीको कप्तानीमा खेल्दैछ । दुवै टोली पहिलो पटक ईपीएल क्रिकेटको फाइलनमा पुगेका हुन्।
यो संस्करणको ईपीएलमा चितवन र पोखराले दुई खेल खेलेकोमा दुवैमा चितवन विजयी भएको थियो। ईपीएलको विजेताले ५० लाख र उपविजेताले १५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।
आईपीएलः डिफन्ङि च्याम्पियन मुम्बई बाहिरियो, कोलकत्ता प्लेअफमा
काठमाडौं– इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलको समूह चरणका सबै खेल शुक्रबार राति सकिए। आफ्नो अन्तिम खेलबाट पनि डिफेन्ङि च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्स चौथो स्थानमा उक्लन नसकेपछि आईपीएलको प्लेअफमा पुग्नबाट वञ्चित भएको छ।
शुक्रबार रातिको खेलमा उसले हैदराबादविरुद्ध ४२ रनको जित निकाले पनि उसले लिग चरणमा गरेको खराब सुरुआतका कारण प्लेअफमा पुग्न नसकेको हो।
उसले लिगमा १४ खेल खेल्दै ७ खेलमा जित निकालेर १४ अंक बनायो। समान १४ अंक बनाएको कोलकत्ता नाइट राइडर्सको नेट रन रेट धेरै भएपछि मुम्बई चौथो स्थानमा उक्लन सकेन। यसकारण ऊ आईपीएलको प्लेअफ पुग्न असफल भएको हो।
यससँगै कोलकत्ता भने चौथो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा पुगेको छ। अब दिल्ली क्यापिटल, चेन्नई सुपर किंग्स, रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र कोलत्ता क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान हुँदै प्लेअफमा पुगेका छन्। अब पहिलो र दोस्रो स्थानका दिल्ली र चेन्नईले पहिलो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै, बैंगलोर र कोलकत्ताले इलिमिनेटरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।